Hay'ada Tillväxtverket oo baabi'isay 7,5 malyoon oo karon - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Christina Lugnet madaxa hay'ada Tillväxtverket. Foto: Ingvar Karmhed/Scanpix
Hay'ada Tillväxtverket oo baabi'isay 7,5 malyoon oo karon
La daabacay måndag 30 juli 2012 kl 11.20
Hay'ad dowliya oo u xil-saaran kobcitaanka dhaqaalaha ayaa u adeegsatay lacagta canshuuraha oo dhan 7,5 malyoon oo karon kulamo hay'ada dhexdeeda ah iyo casumaad, mudo hal-sanno iyo bar ah. Waxaa lacagta lagu baxshay sida booqashada xaruumaha masaajada, kiraysiga guryo waaweyn iyo qalcado. Sida ay qoray wargeyska Dagens Nyheter.
Markii la hordhigay madaxa hay'ada Christina Lugnet ayey arintaan ku noqotay yaab. Waxayna sheegtay in ay amar ku bixisay in dhamaan mehradaha ee la xiriirta waxbarida shaqaalaha hay'ada in ay ayada soo maraan marka hore, ayna dib u eegid ku samaynayso sida ay lacagta canshuuraha u adeegsadaan.
Xaflad ay hay'ado ku qabsatay Grand Hotell ayey ku baxday 428 000 oo karon una dhiganta in ay ku baxday caalaa qofkii 1500 kron taas oo ah afar jibaar sida ay dhigayso sharuucda hay'ada. Raacida sharuucda waxa masuuliyadeeda iska leh madaxa laamaha hay'ada, sharuucda hay'ada ee casumaada waxay ku egtahay 600 qofkii. Waxayna Christina Lungnet sheegtay in ka war hayso sharuucda hay'ada.
- Sharuucda waa mid qosaysa hay'adoo dhan, hadii ay jirto weecasho waa in aan wax ka qabanaa oo aan dib u eegnaa. Laakiin in ay arintaas jirto iyo in kale hada lagama jawaabi karo ka hor inta uusan sawirkood dhaan noo soo bixin ayey tiri Christina Lugnet.